Omunye umqondo wokuthi singalahlekelwa uthando iphendula konke sibheke phansi, okwenza izinhliziyo zethu beat ngokushesha. uthando Crazy ingagqugquzela nezigigaba, umsebenzi imisebenzi emikhulu yobuciko nezingoma banal. Singabathonya udangele, libe elezinzinga-zingwadule, ngisho ubugebengu zobudlova, futhi ngenxa yothando. Ngo indlela esasizizwa ngayo efaneleka ka Bernard Shaw, uma sifuna ukwazi ukuthi yini uthando ngendlela yokusangana, singafunda ikholomu indaba yobugebengu ephephandabeni.
Umqhele ngokumelene ethandekayo: lena choice!
Izwe namanje umxhwele indaba, ogxile uthando ngempela crazy. Lena indaba INkosi Enkulu YaseBrithani Edward VIII wamthanda kabili nge wahlukanisa American Wallis Simpson. Lapho benquma ukushada uthando lwakhe ngokumelene ngokucijile ngabameli iBandla, undunankulu waseBrithani, kanye nezinye izikhulu.
Ekugcineni, ngo-1936, inkosi asiyeke futhi ayethanda ukuhlala nowesifazane, walahla amandla. Ngemva kokuhlala sobukhosi esingaphansi konyaka, wathi: "Angikwazi ukuthwala umthwalo amandla kanye nomthwalo wemfanelo njengoba inkosi, ngoba akanawo unelungelo lokushiya ngaphandle kosizo nokusekela yowesifazane Ngiyakuthanda." Bashada futhi baba iNkosana kanye Duchess, babehlala uthando nenjabulo kuze kokufa kuka-Edward ngo-1972. Duchess ngasinda kuye ngeminyaka 14.
Kusukela uthando ungalahlekelwa ikhanda lakho, hhayi kuphela e-ngomqondo ongokomfanekiso
Esinye sezibonelo kakhulu iningi kwenzekani uthando ngendlela yokusangana, uyisibonelo ubudlelwane senkosi yase-England uHenry III no-Anne Boleyn. Henry wayeshade Anna futhi ngawenza iminyaka engu abaningi, bezama ukuthola isehlukaniso kumkakhe wokuqala. Yena ngokuphuthumayo wafuna lokhu, kodwa ubaba akazange avume esehlukanisweni. Henry kwakunzima ukuyeka, ngakho walahlekelwa ikhanda lakhe, kokufinyelela umgomo lalo, elaliyisikhungo njengenhloko ephakeme besonto sahlukana kusukela Ekaterinoy Aragonskoy. Washada no-Anne, yena waxoshwa eSontweni eSontweni LamaKatolika.
Futhi lokho, wayejabule? Lutho neze! Kamuva ababulawa Anna (ngaleso sikhathi wayesefile kakade uthandana incekukazi yakhe), waquma ikhanda lakhe ngenxa yamacala amanga. Ngempela, uthando cha is sangene, futhi labo-ke uhlala. Bengazizwa luyasiqhubezela ukwenza ngandlela-thile, sibonisa ukuthi lo muzwa ngandlela-thile. Thanda umuntu odlulela deed, kanye nezinye - kuleli cala.
Uthando ungenza ukhala
Kungani ucabange futhi ukuba ufune izindlela zokuziphindiselela kanjani ukuhlola guy ethandweni? Uma umuzwa uthando, ungeke ube ukuhlola okuthile noma ukungabaza kwakhe. Futhi uma bala nizithibe nobuhlobo babo, bese liyini isiqinisekiso sokuthi okufanayo ingemukelwa futhi umlingani. Naphezu kwalokho uke ibalwa konke, kusasa kungaletha noma umdlalo kangcono noma umuzwa wangempela lapho kuyoba nzima ukubhekana nakho futhi sihlele konke kusengaphambili.
Musa elinga ukhanda, sibe qotho ke akudingeki ukuthola indlela ukuhlola guy uthando. Akazange ungaphuthelwa, uma ufunde. Kwenza inhliziyo beat ngokushesha ebusika ukubona yonke imibala rainbow. Ungaqali ubuhlobo bakhe inkohliso futhi ukubala abandayo, ukhanda esingazilungisa wena ukumangala lapho kunzima ukuqagela, futhi nakakhulu ukubala ke. Lalela inhliziyo yakho, ngeke ukuphoxe.
Yenza abangane futhi uthando, ngokuhlonipha umlingani, noma njengoba sicela
Uma ubhekene bemangele, umehluko phakathi uthando ubungani ke noma usemncane kakhulu, noma ungazi umuzwa imilingo uthando. Ubungane - kungcono ubudlelwane onokuthula bushelelezi, lapho kungekho khona indawo unya noma ubugovu. Uma ubungani kukwenza nomona, uthukuthele noma aziphathe kabi maqondana nezinye, kunesizathu sína kokucabanga ungeyena sobugovu kakhulu imizwa yakho. Uma ubungani kukwenza uzizwe imizwelo enamandla kangaka, kuzokwenzekani endabeni uthando? Ubungeke yini uthando lwakho komunye nomunye Stitch ku-umlando emacaleni wobugebengu?
Uthando unrequited noma indaba eyodwa emaceleni
Yini kayikuthethelelwa abesilisa nabesifazane?
Yini kufihlwe nesixha sezimbali. Kanjani ukunikeza Rose intombazane?
I-Manezhnaya square ngaphakathi eMoscow
Umkhawulo kanye isilinganiso Indian Ocean ukujula. Impumuzo kwe-Indian Ocean phansi
Ososayensi bazimisele ukukhokhela izinkulungwane zamaRandi uma uvumelana itheleleke nge pertussis
Thrips ku houseplants. umonakalo Omkhulu kusukela izinambuzane ezincane